ग्यास विस्फोट हुनबाट कसरी जोगाउने, यस्ता छन् रोकथामका उपाय ? (भिडियो सहीत) – Sodhpatra
ग्यास विस्फोट हुनबाट कसरी जोगाउने, यस्ता छन् रोकथामका उपाय ? (भिडियो सहीत)
प्रकाशित : २९ आश्विन २०७७, बिहीबार १८:३८ October 15, 2020
यदि तपाईंले सामान्य होसियारी अपनाउनुभयो भने ग्यासको जोखिमबाट सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो घरमा ग्यास चुहावट भइरहेको कसरी पत्ता लगाएर त्यसको रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ रु हामी तपाइँलाई ग्यास चुहवाटका कारण र रोकथामका उपायहरुबारे जानकारी गराउँदै छौं ।
-बिग्रिएका उपकरणहरु (ओभन, गिजर, बोइलर आदि)
-खुकुलो गरी फिट गरिएका ग्यासका पाइपहरु
-बिग्रिएका पुराना ग्यास पाइपहरु
-चुल्हो खुल्लै छाडि बेवास्ता गरिनु
-ग्यासको सिलिन्डर (रेगुलेटर) अफ नगरिनु
-नेपाल गुणस्तर प्राप्त नगरेको कमसल वा पुरानो रेगुलेटर प्रयोग गरिनु
-खराब ग्यास सिलिण्डर
-स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर
-विषाक्त कार्बोन मोनोअक्साइड
स.सि अथवा सुसेलेको आवाज
-घाँटी खसखस हुने
-नाकबाट रगत बग्ने
-ग्यास चुहावटको माध्यम वा स्रोत बन्द गर्ने
-सलाई, लाइटरहरु नबाल्ने र बिद्युतीय सर्किट पनि सर्ट भई झिल्का निस्कन सक्ने हुनाले बत्तीको स्विचहरु पनि बन्द गर्ने
-घरको सबै झ्याल ढोकाहरु खोल्ने
-स्वच्छ हावामा सास फेर्नको लागि स–परिवार बाहिर खुल्ला ठाँउमा जाने
-नियमित रुपमा ग्यासजन्य सम्पूर्ण उपकरणहरुको जाँच गर्नुहोस्
-दैनिक रुपमा ग्यास सिलिण्डरमाथि ध्यान दिनुहोस्
-चुल्होमा निलो रंगको आगो नबली पहेँलो वा सुन्तला रंगको आगो बलेमा प्राविधिकलाई बोलाएर देखाउनुहोस्
-ग्यास प्रवाह हुने ठाँउबाट कुहिएको गन्ध आएमा सावधान रहनुहोस्
-ग्यास रहेको ठाँउ नजिक झ्याल खुल्ला राख्नुहोस्
-माथि दिइएका स–साना उपायहरुको अवलम्बन गरेमा पक्कै पनि ग्यास चुहावट र यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।
हेर्नुहोस सरोकार फाउन्डेसन र अतुल्य फाउन्डेसन द्धारा तयार पारीएको यो भिडियो सामाग्री…!